Hazo mitobatobaka | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Hazo mitobatobaka
Ahoana no hikarakarana ny akorandriaka, fitsipika fampielezana ny fambolena
Ny iray amin'ireo vokatra ankafizin'ny mpamboly dia mofomamy. Tany iray tsy fahita firy izay misy karazany iray na maromaro. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba hitombo sy hikarakarana ny henom-boasary indray. Ny fomba famokarana ny nono, ary na tokony hatao izany. Iray amin'ireo tsiambaratelo lehibe indrindra amin'ny fambolena henan'io karazany io ny fitondrana mahaleotena.
Raspberry Hercules: famaritana isan-karazany, fambolena sy fambolena
Raspberry Hercules - asan'ny fomban-javamaniry nentim-paharazana. Ny nofinofy zaridaina dia tanteraka - ireo voankazo robine mena, ny voankazo amin'ny taom-pambolena, ny fijinjana maranitra, na ny hatsiaka, ary izany rehetra izany tsy misy tranga sy teboka manokana. Fantatrao ve? Ny tsy fitovian-tsain'ny sisa tavela (avy amin'ny Fr. Remontant - ny fitsangatsanganana, ny felany) - ny mamoa voa indroa isan-taona.
Ny marika tsara indrindra amin'ny selam-paty mena: inona no safidy ho an'ny fambolena ao amin'ilay tranokala
Ny ronono mavo - iray amin'ireo vokatra tsy mahazatra indrindra, izay tsy hita matetika ao amin'ny zaridaina. Ary tena zava-poana izany, satria rehefa mitombo io voay io, dia tsy azo atao mihitsy ny mandà izany. Mavo maitso mavokely manana tombony maro mihoatra ireo karazana mena sy mainty. Noho ny voka-dratsin'ny anthocyanins (loko), dia tsy miteraka zava-mahadomelina amin'ny zaza izy ary mety amin'ny vehivavy bevohoka.
Ireo toro-hevitra lehibe momba ny fambolena Hussar: famaritana karazana, famolahana sy fikarakarana
Hussar dia kalitao faran'izay malemy sy tsy mendrika izay nahazo ny fankasitrahana teo amin'ireo zaridaina maro. Na dia misy karazana fikarakarana kely aza dia mitondra vokatra avo lenta. Ny voankazo Hussar Raspberry dia be maitso, mamy, mamy ary mahasalama. Andeha isika hanohy ny famaritana ny karazana gusar mofomamy, ary koa hianatra momba ny toetran'ny fambolena sy fikarakarana ity vokatra ity.
Ny endriky ny fambolena karazam-boanjo "Caramel": ireo karazana karazana, fambolena sy fiahiana
Hevitra maro isan-karazany no manintona ny saina. Mamy, beza lehibe, kirihitra, mitondra voankazo mandritra ny vanim-potoana iray manontolo dia tsy ny tombony rehetra amin'ny karazany vaovao. Ny iray amin'ireo vokatra vaovao ireo dia ny "caramel" raspberry. Hita fa tsy ela akory izay, tamin'ny 2013, ary ireo tompon'io karazana io dia afa-po tamin'ny fijinjana voalohany.
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao mba hampitomboana ny sahona Yellow Giant
Maro no efa zatra mahita mavokely mena na mena maitso, ary ny ampahany kely amin'ny tantsaha ihany no mahafantatra ny fisian'ny rongony mainty sy mavo. Tsy fahita firy ny mihaona aminy ao an-jaridainantsika. Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny karazam-boasary Yellow Giant. Noho ny kely vidy amin'ny loko anthocyanine, dia mety tsara ny fampiasana zaza tsy ampy taona, herisetra sy vehivavy bevohoka.
Famaritana ny karazana varimbazaha mena mainty
Ny ronono dia efa nohajain'ny mponina tamin'ny fahavaratra. Ao amin'ny efitrano zaridaina dia afaka mahita ronono mainty iray manokana ianao. Io zavamaniry io dia mitondra vokatra be dia be, manampy amin'ny hatsiaka, ary samihafa karazam-bozaka mainty no mampiavaka ny tsiro sy ny loko mahaliana. Ny ronono mena dia antsoina koa hoe blackberry-like. Anisan'ny fianakaviana Rosaceae izy ary tonga avy any Amerika Avaratra.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fambolena sy fikarakarana hazo Tarusa
Mavo mamomamo tsy mamela na oviana na oviana. Indrindra rehefa mahita hazo. Any amin'ny zaridaina rehetra dia afaka mahita karazana legioma samihafa. Ny hazo madinika malaza indrindra amin'izao fotoana izao dia mihevitra ny Tarusa sahala. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra ny fomba tsara hambolena sy hikarakarana ireo karazam-borona isan-karazany.
Rasimbary "Cumberland": ny toetoetran'ny karazana sy ny fambolena agrotechnology
Mifanohitra amin'ny fiavian'ny karazam-bolo mena mahazatra, ny endriny mainty dia miavaka amin'ny endriny ivelany, satria tsy fahita firy ao amin'ny faritra an-tanindrazana. Inona no azoko lazaina, na dia tsy nividy aza dia tsy voatery hitady zana-ketsa mena mainty "Cumberland", izay antony mahatonga ny olona vitsivitsy hiahy ny fambolena sy ny fikarakarana azy.
Ahoana ny fomba hampitomboana ny mofomamy be "Atlant"
Ny fambolena karazam-boasary dia tena malaza eo amin'ireo zaridaina amin'izao fotoana izao. Manana mari-pankasitrahana manokana ny Raspberry "Atlant" noho ny fanoherany ny aretina, ary ato amin'ity lahatsoratra ity dia hahita fanazavana momba ny karazana, ny sary sy ny fitsipiky ny fikarakarana. Ny endriky ny biôlôjika amin'ny karazana vary Raha te hijery akaiky kokoa an'io karazam-boanjo io isika, dia hojerentsika ny fisehony sy ny endriny.
Raspberry Polka: famaritana sy fambolena voankazo goavana
Sarotra ny mahita mpivarotra amam-bolana, izay tsy hisakafoan'ny ronono mangatsiatsiaka sy malefaka. Miaraka amin'ireo karazam-bary, trondro ary zavamaniry hafa mahasoa, dia mirehareha ny toerana amin'ny ankamaroan'ny zaridaina. Ankehitriny, misy karazana zavamaniry mihoatra ny 120, fa ny ankamaroan'ny olona dia liana amin'ny karazan-tsakafo maitso sy mamy be.
Ahoana ny fomba famolavolana zana-kazo fihinam-boa eny amin'ny lohataona?
Ny akorandriaka Raspberry dia tena mahafinaritra ny mpamboly, fa tsy noho izy ireo afaka mitondra voankazo, fa koa mifandraika amin'ny asany. Natokana ho an'ny rindrina na ravin'olombom-bovoka miaraka amin'ny voankazo marevaka no hamolavola endrika tsara tarehy eo amin'ny endrik'ireo voankazo marevaka.
Ahoana no hanesorana ny fihinanan-kena?
Ireo izay mino fa mihamangatsiaka kokoa noho ny eo amin'ny kirokelika tokana ao anaty tsiron-tsakay mani-pofona makadiry, dia diso tanteraka izy ireo. Raha ampitahaintsika ny kirihitra sy ny voamaina, dia ho hitantsika avy hatrany fa ny voankazo dia mihamangatsiaka kokoa noho ny ravina be dia be, ary tsara kokoa ny tsiro tsaratsara kokoa amin'ireo voankazo izay nitombo teo amin'ny kirany.
Mamboly karazam-boaloboka isika "Kirzhach"
Ny karazana varimbazaha Kirzhach dia efa ela no nitombo teo amin'ny tara-pahazavan'ny olona maro. Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny toetran'Andriamanitra izy io, fa noho ny fandaniana ara-dalàna azy, dia tsy ilaina koa ny mitandrina tsara. Noho izany, io karazam-boasary io dia iray amin'ireo malaza indrindra eto amin'ny firenentsika.
Kanadianina Raspberry: famaritana sy fambolena vary
Androany dia misy karazam-boanjo maromaro marobe, anisan'izany ireo olo-malaza ireo. Vao haingana, ny karazam-boalobok'i Kanadiana, izay solontenam-panjakana malaza amin'ny karazana tsara indrindra amin'ity vondrona ity, dia hita matetika any amin'ny kianja dacha. Ao anatin'ity lahatsoratra ity, dia hanome fanazavana momba ity karazana ity isika ary mamaritra ny fomba hikarakarana azy.
Mamboly ranom-boasary Rosiana any amin'ny zaridainany
Tia mihinana ireo voankazo mamy sy vitaminina amin'ny fahavaratra isika rehetra. Iray amin'ireo karazam-boaloboka mahazatra indrindra indrindra amin'ireo mponin'ny lohataona ny Pride of Russia. Ao amin'ny lahatsorantsika dia hiteny aminareo izahay hoe inona io karazana io ary ahoana no hikarakarana ireo kirihitra. Famaritana ny Raspberry Ny hambom-pon'i Rosia matetika dia hita ao amin'ny tara-dacha, ary ny famaritana ny karazany dia mahazatra ny mpamboly mpamboly.
Ahoana ny fomba hanamboaran-jazakely any amin'ny lohataona?
Hazo maniry - mahandro, mamy ary mahasalama mahasalama. Momba ny tononkalo sy ny tononkalo. Mandritra izany fotoana izany, ny zavamaniry dia tsy mendri-piderana, ary na dia ny vahiny aza dia afaka maniry hazo mamy. Ny lohataona mamboly legioma dia heverina ho mahomby sy mamokatra indrindra - hojerentsika ny antony. Ny lohataona Lohataona Ndeha hojerentsika ny fotoana hanamboaran-jazakely amin'ny lohataona.
Ny fototry ny fikarakarana ara-dalàna ny fihinanan-kena amin'ny lohataona
Mamy sy mamomamo, mamy sy salama, manasitrana ary maniry toy izany - mermaid. Sarotra ny maka sary an-tsaina hoe tsy misy io voankazo io ao amin'ny dacha, satria tsy mitaky fikarohana lalina, miaraka amin'ny fikarakarana fambolena voaloham-bary amin'ny lohataona, dia hahafaly amin'ny vokatra be dia be izany. Fambolena sy fanondrahana kirihitra. Ny zavamaniry tsirairay dia tia ny firafitry ny tany, ny hazavana sy ny mpifanolo-bodirindrina.
Fitsipika momba ny fikarakarana ny lohataona sy ny fihinanana henan'alika amin'ny lohataona
Sakafo ny fihinanan-kena amin'ny lohataona na tsia - izany no fanontaniana. Andeha hojerentsika hoe inona marina ny fikarakarana ny fambolena ny fambolena, ary inona no tena ilaina mba hanamboarana vonromatika amin'ny lohataona mba hampitombo ny vokatra. Inona no fikarakarana ny lohataona? Efa tonga ny lohataona ny lohataona, izay midika fa fotoana hanombohana miasa amin'ny fihinanan-kena.
Karazan-tsakafo maniry eny an-tanimboly
Tadiavinao ve ny kirihitr'io ravinkazo mahavokatra miaraka amin'ny voankazo mamy sy ravina mamy toy ny rakotra mainty eo amin'ny teti-dratsinao? Io voninkazo io dia antsoina hoe mofomamy Tibetana. Androany, ny mponina any amin'ireo firenena Baltika sy Polonina dia mahatsapa izany, raha any Okraina kosa ny karazana dia mbola tsy mahagaga. Andao hifankazatra aminy tsy ho ela!
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Hazo mitobatobaka